Daawo: CC Shakuur oo ku dhowaaqay inay dhamaatay musharaxnimadiisa - Caasimada Online
Home Warar Daawo: CC Shakuur oo ku dhowaaqay inay dhamaatay musharaxnimadiisa
Daawo: CC Shakuur oo ku dhowaaqay inay dhamaatay musharaxnimadiisa
Muqdisho (Caasimada Online) – Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka kuwooda ugu saameynta badan ayaa ka hadlay xaaladda uu hadda dalku ku jiro, kadib markii Dowladda Soomaaliya ay sameysatay muddo kordhin laba sano ah.
Cabdiraxmaan ayaa sheegay in dalka uu hadda galay waji hoggaamiye kooxeednimo, wuxuuna madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyey inuu jabinayo sharciga iyo xeerarka ku yaalla Soomaaliya.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa Dowladda Eretariya ku eedeeyey inay ka shaqeeneyso khalalaasaha siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya, wuxuuna sheegay in arrintaan ay keeni karto in dalku uu ku laabto sidii uu ahaan jiray 20 sano ka hor.
Sidoo kale Cabdiraxmaan ayaa si cad u sheegay in ay dhamaatay rajadii laga lahaa in doorasho ka dhacdo dalka Soomaaliya, sidaas darteedna uu Muqdisho kasoo fuqsaday boorarkii musharaxnimadiisa, kadib markii uu ogaaday in aysan muuqan ififaalo muujinaya doorasho.
Waxaa uu dhaliil u soo jeediyay Maamul Goboleeedyada taageeray sharcigii ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya, kaas oo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu saxixay xalay.
Beesha caalamka ayaa dhaleeceysay go’aankii ay Golaha Shacabka Soomaaliya muddo labo sano ah ugu kordhiyeen dowladda Soomaaliya.
Midowga Yurub, Mareykanka iyo UK ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta go’aankan.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay saxiixay sharciga gaarka ah ee muddada loogu kordhiyay hey’adaha dowladda federaalka.